WAR LA SUGAYAY: Madaxweynaha Barcelona Ee Bartomeu Oo War Rasmi Ah Kasoo Saaray Haddii Uu Is-Casilayo & Jamaahiirta Oo Xog Helay – Laacibnet.net
WAR LA SUGAYAY: Madaxweynaha Barcelona Ee Bartomeu Oo War Rasmi Ah Kasoo Saaray Haddii Uu Is-Casilayo & Jamaahiirta Oo Xog Helay
October 27, 2020 Apdihakem Omer Adam
Madaxweynaha kooxda Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa war rasmi ah kasoo saaray warbixino ay shalay qorayeen saxaafada waaweyn ee ree Spain oo sheegayay inay jirtay suurogalnimo uu shalayba shaqada iskaga casili karayo.
Kabtanka kooxda ee Lionel Messi oo u arka in kooxda uu Bartomeu hoggaanka u yahay aysan si wanaagsan u wadin kooxda ayaa dagaal adag la galay suuqii xagaaga isaga oo doonayay inuu qaab bilaash ah ugu biiro Man City.
Si kastaba, Messi ayaa ugu yaraan sanadka ka hadhsanaa heshiiskiisa Camp Nou sheegay inuu dhammaysan doono isaga oo iska diiday in Barcelona oo sida uu sheegay uu jecel yahay inuu maxkamad la tago.
Josep Maria Bartomeu ayuu cadaadis badani ku fuulay qaabka uu ula tacaalay doonistoo Lionel Messi ee inuu kooxda ka baxo iyadoo ay kumanaan kamid ay taageerayaasha kooxdu isasoo tubeen barxada Camp Nou iyaga oo codsanayay in Bartomeu is casilo.
Haddaba, Josep Maria oo dhawaan saxaafada la hadlay ayaa si rasmi ah ugu quus gooyay dhammaan taageerayaasha filanayay inuu is-casilo isaga oo sheegay inuusan abid ku fikirin inuu iska casilo oo uu k dego xilka kooxda.
Bartomeu oo arrintaas ka hadlaya ayaa yidhi “Ma jirto sabab aan anigu isku casilaa, maaha wakhti sax ah oo aan warqada codsiga iscasilaadayda dhiibo, qofna ma awoodi doono inuu go’aamada gaadho haddii aan go’aansado inaan iscasilo”
“Fikrada ah inaan xilka ka dego marnaba maskaxdayda kuma aysan soo dhicin” ayuu yidhi madaxweynaha kooxda Camp Nou oo warkiisa si buuxda u caddeeyay.